Dagaal xoogleh oo ka dhacay magaalada Labaad ee wadanka Lubnaan • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Dagaal xoogleh oo ka dhacay magaalada Labaad ee wadanka Lubnaan
Dagaal xoogleh oo ka dhacay magaalada Labaad ee wadanka Lubnaan
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay iska horimaadyo ka dhacay magaalada Tripoli ee ah magaalada labaad ee wadanka Lubnaan.
Dagaaladan oo dhacayey labadii maalmood ee lasoo dhaafay ee Salaasa iyo Arbaca ayaa u dhaxeeya dadka Sunnida ah iyo kuwa Calaweyiinta oo kala taageera dhinacyada ku dagaalamaya wadanka Siiriya.
Magaalada Tripoli ayaa ah magaalo uu si weyn u sameeyey dagaalka ka socda wadanka jaarka la ah ee Siiriya, waxaana magaalada wada degen Sunniyiinta taageera mucaaridka Siiriya iyo Calawiyiinta uu kasoo jeedo hogaamiyaha dowlada Siiriya ee Bashaar Al Assad.
Dagaaladan ugu danbeeyey ayaa magaalada Tripoli ka qarxay kadib markii Telefishinka dowlada Siiriya laga siidaayey meydadka dhalinyaro badan oo sunniyiin ah oo ay dileen ciidamada Siiriya, kadib markii ay kasoo tilaabeen xadka u dhaxeeya dalalka Lubnaan iyo Siiriya.
Dhalinyaradan oo u socday inay gacan siiyaan kooxaha mucaaridka ee Siiriya ayaa badankood kasoo jeeday magaalada Tripoli, wuxuuna dilkooda sare usii qaaday xiisadii horey uga dhaxeysay labada bulsho ee ku wada dhaqan magaaladaasi saaran xeebta.